Soo-saareyaasha boorsada-qaboojiyaha waaweyn ee jilicsan & Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Warshad boorsada boorsada qabow oo jilicsan
Awoodda La qaadan Karo ee La Qaadan Karo Jilicsan
Boorsada qaboojiyaha la qaadan karo ee tayada sare leh. Waxyaabaha tayada sare leh ee 840D-TPU iyo jiinyeer hawo-cufan leh ayaa hubinaya in biyuhu xireen Naqshadaynta boorsada ayaa si weyn u wanaajinaysa marinkeeda. Awoodda ballaaran ee 26 gasac ayaa buuxisa baahiyahaaga badan ee keydinta. Ku rid dhammaan cuntadaada, cabbitaannadaada, daawooyinkaaga, iwm.
Bag meeldhexaadka ah Qalin qaboojiyaha
Waxay u egtahay qaboojiye yar oo banaanka ah oo la qaadi karo iyada oo aan la galin. Waxaad ku dhex ridi kartaa miro, cabitaan, hilib, biir, iwm si ay u ahaadaan kuwo cusub oo qabow, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu ilaaliyo caanaha naaska, daawooyinka, tallaalada, iyo wixii la mid ah.